Jubbaland oo sheegay in kooxda Al-shabaab ay weerar madaafiic ah ku qaaday Garoonka Kismaayo. – Radio Daljir
Luulyo 2, 2013 4:43 b 0
Kismaayo, 2. July 2013- Kooxda Al-shabaab ayaa weerar culus habeenimadii xalayto ahayd waxay huwiyeen garoonka weyn ee diyaaradaha ee Magaalada Kismaayo halkaasi oo ay gacanta ku hayaan ciidamada Maamulka Jubbaland.
Radio Daljir oo xiriiro kala gedisan la samaysay maamulka iyo dad xog Ogaal ah oo ku sugan Kismaayo waxaa loo sheegay in magaalada laga dareemay rasaasta lagu tuurayey gudaha garoonka habeenimadii xalayto ah, in kastoo aan la shaacin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay.
Maareeyaha ?Garoonka diyaaradaha ee Kismaayo Carab Axmed Cali ayaa ka hadlay weerarka lagu soo qaaday garoonka wuxuuna sheegay in weerarkaasi uu ahaa gaadmo ah, Carab wuxuu carabka ku adkeeyey in kooxda Al-shabaab ay iyagu weerarka fuliyeen.
? Rasaasta ka dhacda qoryaha waa weyn ayey adeegsadeen oo dhinaca duurka ayey ka soo dhacaysay, balse waan ka hortagnay waana iska difaacnay, waa kooxda Al-shabaab dhowr jeer ooh ore ayey sidaan oo kale sameeyeen? ayuu yiri Mareeyaha Garoonka Carab Axmed.
Weerarkan ay kooxda Al-shabaab ku soo qaaday garoonka Kismaayo ayaa imanaya maalmo yar kadib markii halkaasi uu dagaal kharaar ku dhexmaray dhinacyo is diidan oo ku muransan maamulka iyo gacan ku haynta magaalada xeebta ah ee Kismaayo.